Laacib horay u soo maray Kooxda Real Madrid oo markii uu ciyaaraha ka fariistay Kalluumeysato iska noqday! – Gool FM
(Madrid) 17 Jan 2022. Laacibkii hore ee Kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Fábio Coentrão ayaa markii uu ciyaaraha ka fariistay Kalluumeysato iska noqday.
Inta badan laacibiinta kubadda cagta marka ay soddonka kor u dhaafaan oo ay ka fariistaan ciyaaraha kubadda cagta waxaa badidoodu ay noqdaan Weriyeyaal ciyaaraha falanqeeya ama tababareyaal kubadda cagta ah, laakiin xiddigii hore ee dambeedka bidix iyo garabka kaga ciyaari jiray Real Madrid iyo xulka qaranka Bortuqiiska Fábio Coentrão ayaa yeeshay mihnad ama xirfad ka duwan tii looga bartay markii uu ka fariistay ciyaaraha 29-kii Janaayo 2020-kii.
Xirfadda cusub ee Coentrão oo haatan 33 jir ah ayaa waxay tahay kalluumeyste, isagoo u jiheystay dhanka badda, halkaas oo xilligii uu Madrid u ciyaarayay ka iibsaday Doontiisii ugu horreysay oo ay saaran yihiin 15 shaqaale oo ay shaqadoodu tahay in kalluunka iyo kheyraadka badda u soo saaraan ciyaaryahankii hore ee Coentrão.
Coentrão waxa uu Real Madrid u saftay in ka badan 100 kulan, isagoo la qaaday labo Champions League iyo labo horyaalka La Liga ah, halka sidoo kalena xulka Portugal uu u dheelay 52 kulan.
Isagoo wareysi siinayay youtube-ka Empower Brands – waxa uu Coentrão yiri: “Nolosha badda ceeb ma ahan, sida dad badan ay la tahay, waa shaqo ka mid ah shaqooyinka caadi ah, baddu aad bay u qurux badan tahay, waxaanan kula talinayaa dadka badda jecel in ay riyadooda ka dhabeeyaan oo ay badda ka xamaashaan”.
Coentrão oo hadalka sii wata waxa uu yiri: “Kalluumeysigu xitaa waa shaqada jiilka cusub, Aabahay kalluumeysato ayuu ahaa doon ayuuna lahaa, markii aan yaraana waxaan u raaci jiray badda, noloshayda oo dhanna waa badda”.
“Waan ogaa in mar uun ay kubadda cagtu dhammaanayso, sidaa darteed waxaan jecleystay in aan dhan kale u jiheysto oo sameeyo waxa ay nafteydu jeceshahay”.
Haatan waxa uu Coentrão leeyahay dhowr doomood oo kalluumeysi, waana xirfad uu si caadi ah uga shaqeysto.
Isku soo wada duub ciyaaryahan Coentrão oo Champions League-gii 10-aad ee (La decimal) la qaaday Real Madrid ayaa ah Milyaneer, hase yeeshee waxa uu doortay in ka mid noqdo kalluumeysatada Bortuqiiska, taasoo ah shaqo uu xitaa Cristiano Ronaldo ku riyoon jiray waagii uu yaraa.